Lalao 2 amidy amidy izay mahaliana anao | Vaovao IPhone
Tonga tamin'ny alakamisy izahay dia tena faly, dodona ny faran'ny herinandro, ary niaraka tolotra sy fampiroboroboana vaovao mba hahafahanao manohy mankafy ny iPhone na ny iPad mahita ny atiny vaovao isan'andro, nefa manangona vola kely.
Ary mba hamporisihana anao amin'izany lalana hiala sasatra amin'ny faran'ny herinandro izany dia manolo-kevitra izahay anio lalao roa mahaliana, samy hafa be amin'ny tsirairay, fa azoko antoka fa ho tianareo izy ireo. Mazava ho azy, tsy maintsy maika ianao satria ny tolotra dia mandritra ny fotoana voafetra ary mety hifarana amin'ny fotoana rehetra. Manantena aho fa nankafizinao izany!
1 Mini Wars Blackout
2 Fandraisana ao ambadiky
Manomboka ny safidinay fampiharana sy lalao amidy izahay anio amin'ny "Mini Wars Blackout," a lalao ady endrika minimalista ary ao anatin'izany ny «mini» rehetra, ny ady, ny miaramila ... Miaraka amina endriny tena tsara sy tany am-boalohany, ary vokarin'ny feo mahatalanjona izay manome traikefa filokana lalina kokoa, tokony tafavoaka velona amin'ny fanafihan'ny fahavalo maro amin'ny ady mahavariana izay mampiasa fitaovam-piadiana, explosives ary hery manokana vitsivitsy. Ary koa, azonao atao ny mihantsy ny namanao hahazoana ny isa ambony indrindra.
"Mini Wars Blackout" dia misy vidiny mahazatra 2,29 euro, nefa azonao atao maimaim-poana izany mandritra ny fotoana voafetra.
Fandraisana ao ambadiky
«Trano ao ambadiky» ao amin'ny handinika ny mombamomba ny mpitsoa-ponenana iray ianao izay noroahin'ny tafika mpikomy hiala ny fireneny. Tsy manan-kialofana sy tafasaraka amin'ny fianakaviany iray manontolo ianao dia tsy maintsy afaka miady mba ho tafavoaka velona amin'ny hanoanana sy ny aretina ary hahazoana fiarovana any Eropa. Ity dia lalao iray izay mitantara tantara tena misy sy azo havaozina izay manolotra traikefa samy hafa ihany koa noho ny fisehoan-javatra miseho tampoka eo amin'ireo safidy maro samihafa.
"Home Behind" dia misy vidiny mahazatra 3,49 euro, nefa izao dia azonao amidy amin'ny 2,29 € izany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Lalao 2 amidy amidy izay mahaliana anao
Microsoft hamoaka ny kinova LTE an'ny Surface Pro amin'ny volana Desambra